Iimpawu zezibane eziphezulu ze-bay
Ngophuhliso lwamashishini, iimveliso ezahlukeneyo kufuneka ziveliswe kwaye zilungiswe. Izibane azinakwahlulwa ukusuka kumgangatho wefektri. Ukuqinisekisa inkqubela phambili yemveliso kunye nomsebenzi wokuhlola wabasebenzi, indawo efanelekileyo yokukhanyisa iyafuneka kumasifundisane ukuhlangabezana nomsebenzi nee ...
Itekhnoloji yoyilo oluphambili lwe-bay high bay light
Iitekhnoloji ezintsha, izinto ezintsha, kunye neetekhnoloji ezintsha zisetyenzisiwe ngokuqhubekekayo kuyilo lwamandla amakhulu e-LED, zibeka isiseko esiqinileyo kuyilo lwezibane ze-LED ezinamandla amakhulu. Kwizibane ze-LED, ezona zinto zibaluleke ngakumbi kukuqhuba kunye nokusasaza ubushushu. 1. Qhuba i powu ...
Kulehlobo ligqatsayo, uManyano lwethu lwe-Hengjian Optoelectronics lubonakalise uthando olukhulu kubasebenzi kwaye sabathumela iipopu ezipholileyo. Makhe sijonge ingxelo evela kumgca wangaphambili. Imisebenzi epholileyo yemanyano yabasebenzi iqale ngoJulayi 1, kwaye yonke imihla ngo-14: 00 xa lelona xesha lishushu, si ...
Umnyhadala ophindwe kabini weThoba ukuthumela ubushushu
Unyaka emva konyaka, kulo nyaka ukhethekileyo, njengesiqhelo, safika kwikhaya labongikazi eMpuma Butou, kwiDolophu yaseZhangqi. Lo ngunyaka wesihlanu sifika kwikhaya labalupheleyo. Kule minyaka mi-5, asikaze siyilibale injongo yethu yoqobo, sizisa ubushushu obuncinci koomakhulu noomakhulu ...
Izibonelelo zomhla wokuzalwa
Ngexesha elifudumeleyo lasentwasahlobo, singenise izibonelelo zokuzalwa kanye ngonyaka. Ngokulungiswa ngononophelo kweNkampani yeHengjian, wonke umsebenzi ufumene isipho esimnandi sokuzalwa. Okokuqala, sabhala iintsikelelo ngeenkwenkwezi zokuzalwa kumakhadi emibuliso. Ukuba ...